IMeya ithi ibhecwa ngobende – Bayede News
Umndeni uthi iMeya yone ingane
Posted on 12/07/2019 18/07/2019 by Bayede-News
IMeya uMnu uThami Ntuli
Umndeni uthi iMeya yone ingane kepha yona ithi leli yitulo lokuyinyundela kwezepolitiki
UYabalisa umndeni wengane ebifunda kwesinye sezikole eNkandla okuthiwa imoshwe yaphinde yalaxazwa okwenyongo yenyathi nosana yisakhamuzi sokuqala kuMasipala iNkandla. Abazali bale ntombazanyana esingeyigagule ngegama ukuvikela usana, basola iMeya uMnu uThami Ntuli osanda kuqokelwa esikhundleni sokuba nguSihlalo we-Inkatha Freedom Party (IFP) KwaZulu-Natal ngesenzo abasibize ngechilo.Unina wale ntombazane uKhekhe Ncanana kanye nogogo wayo uMaNgema bakhala ngokuthi uMnu uNtuli ucekele phansi ikusasa lengane yabo wajike wayilaxaza nosana.
“Kumanje ingane yami ihlezi ekhaya ayifundi ngoba ikhulisa le ngane eyikhuleliswe yile ndoda endala esesigabeni sokuba ngumkhulu kuyona. Okubuhlungu wukuthi nasekhaya kithi eMtubatuba lapho ikhosele khona nengane kudonswa kanzima njengoba kungekho osebenzayo bonke beziphilisa ngemali yesibonelelo. Nami njengoba ngingahlali khona angikwazi ukulekelela ekondliweni kwengane ngoba ngiziphilisa ngamatoho,” kubalisa unina wentombazane.Omunye womakhelwane nokho ongathandanga kudalulwe igama lakhe upotshozele Ozul’azayithole ukuthi le ntombazana yakwaGumede ikhosele ekhaya konina eMtubatuba ngoba kubo eMzingazi beyixoshele “ukugila umkhuba” noNtuli obelisoka likababekazi wayo.
“Empeleni lo babekazi wayo onguDudu Gumede emdlele isoka wayezithathele yona isencane wazikhulisela njengoba ebeyifundisa. Kuthe esebambe ukuthi kanti igila imikhuba nesoka lakhe (uNtuli) wayixosha yayohlala kubo kwayo elokishini KwaMsane. Nakhona kuthe bangalithola iqiniso ngembangela yengxabano nabo bayixosha yayohlala ekhaya koninalume,” kusho umthombo.Uqhube wathi : “Okubuhlungu wukuthi ubabekazi wayo uDudu ugcine edlulile emhlabeni ngenxa yokhwantalala olumhlasele ngenxa yalesi simo sokukhulelwa kwayo ikhuleliswa yisoka lakhe,” kusho umthombo noveze ukuthi umufi uze walibhobozela umndeni ithumba ngesikhathi esesokhukhwini lokufa.
“Ngesikhathi ukugula sekumxinile ubize amalungu omndeni kanye nayo ingane wafike wayiphihliza indaba. Uthe empeleni yena akayizondi ingane yomfowabo kodwa uzonda isenzo sayo sokukhuleliswa yisoka lakhe. Phela sonke lesi sikhathi le ngane ibingafuni ukudalula umuntu oyikhulelisile ngoba ithi inamahloni okukhuleliswa yikhehla,” kuqhuba umthombo.
Umthombo uqhuba uthi: “Ubabekazi wayo ushona nje ubelwa indaba yokuphoqa uNtuli ukuba ondle ingane. Ethi ngeke uNtuli afike axhaphaze ingane yomfowabo ajike ayilaxaze nengane ngoba akwenzile ukwenze ewazi umphumela wakho. Nezingcingo zengane akasazibambi,” kuqhuba umthombo.Nonina wale ntombazane uhambe emagameni omthombo wathi umtanakhe usehlala kubo ngenxa yokuthi bamxoshile kubo ngoba evume ukukhuleliswa nguNtuli obelisoka likababekazi wakhe.
“Siyafisa ukuthola ongaqhamuka nosizo ukuphoqa le ndoda yakwaNtuli ukuba yondle ingane yayo ngoba ekhaya akusebenzi muntu. Lesi simo siyihlukumezile ingane yami njengoba benomzukulu sebephenduke ondingasithebeni. Le nto imhlukumeze kakhulu nasengqondweni. Ukube nginamandla ngabe ngimtholela nosizo lokwelulekwa ngokwengqondo. Okubuhlungu wukuthi nobabekazi wakhe okunguyena obemfundisa akasekho emhlabeni,” kuzikhalela unina.
Le ntombazana ebelethe usana lwentombazana ikuqinisekisile ukuthi uyise wengane nguMnu uNtuli kodwa yala yaphetha ukwenaba nendaba.“Kukhona okuncane asake wakuphosela ingane, nokho bhuti bengicela sibuye sixoxe, kukhona okusangixinile,” kusho yona ngaphambi kokuvala ucingo.
Ukuqinisekisa ukuthi uNtuli naye ubeka uhlangothi lwakhe kulolu daba olubucayi nolungehlisa isithunzi sakhe emphakathini awuholayo naseqenjini, Ozul’azayithole bamnike ithuba elifanayo nalabo abamsolayo. Ezinsolweni uNtuli uthe uvelelwa yiziga uqobo.
“Anginazo izingane engingazondli, zonke izingane zami ngiyazondla. Ngakho ngamanga aluhlaza ashiwo ngabantu abazama ukungcolisa igama lami. Kuyacaca ukuthi leli yitulo lezepolitiki eliphekwa ngabathile ngaphakathi eqenjini abazama ukungingcolisa njengoba sisanda kubuya engqungqutheleni yeqembu,” kusho uNtuli.
Ebuzwa ukuthi ngabe uyazana yini nale ntombazana yaseMzingazi kanye nobabekazi wayo uDudu Gumede uphendule kanje: “Angazani mina nalabo bantu obabalayo baseMzingazi. Angikaze ngithandane nabo, futhi angazani naleyo ngane okuthiwa ngiyizalise leyo ntombazane. Angikaze ngithandane nengane yesikole,” ephika elala ngentaba uMphemba.Umthombo usuphetha udaba ngakolwawo uhlangothi uthe: “Kubuhlungu kithi singomakhelwane ukubona ingane okuthiwa izalwa yimeya ehlonipheke njengoNtuli, ibhuqabhuqwa yindlala ekubeni njengoba eyimeya unemali yonke. Uyabaleka akafuni ukondla ingane yakhe.”
Ugogo uMaNgema naye ubalise ngesimo umzukulu wakhe nosana abahlala ngaphansi kwaso eMtubatuba. “Mtanami isimo lapha ekhaya koninalume asisihle njengoba kungasebenzi muntu khona. Khona kade ngagcina ukukhuluma nomzukulu, ngisazoke ngimfonele ngizwe impilo,” kusho ugogo uMaNgema.
“Ngibuhlungu ngekusasa lomtanami elicekelwe phansi yile ndoda endala eyimeya. Umtanami ubenekusasa eliqhakazile futhi ehlezi kahle no-Anti wakhe ubemfundisa bengakaxatshaniswa yile ndoda. Le ndoda idlale ngomtanami ngoba engasenayise. Ngiyaludinga impela usizo ukuze batakuleke kulesi simo abakuso,” kusho uNcanana.Uthi ubaba wale ntombazane ushone ngokudutshulwa ngowezi- 2004 ngoba wayesethimbeni elalilwisana nokuntshontshwa kwemfuyo.
Uthi ufisa nabakubo komtanakhe bamxolele phela ukuze abuyele ekhaya ngoba isimo sasekhaya konina siyabheda.“Bengingajabula uma kungaba khona ongayomkhulumela nobaba wakhe omdala ukuba basale sebethambisa izinhliziyo bayixolele ingane emaphutheni ewenzile, bayemukele ibuyele ekhaya.
Impela khona yona ingane kodwa ngicela bayixolele emaphutheni ayo,” kusho uKhekhe Ncanana.UNcanana uqhuba uthi kubuhlungu ukuthi umzukulu wakhe ubhuqabhuqwa yinkemane eMtubatuba, uyise ebe ekhona futhi enemali yonke.Kumele bajeziswe labo baba abadlala ngezingane zethu ngoba bezinunusele ngemali okuthi uma sezikhulelwe bajike bazilaxaze.“Ngikhuluma nawe nje akafuni ngisho ukuzihlanganisa nodaba ngokuzoyihlawula ingane,” kuphetha uNcanana.